Gburugburu spring-esiri spring-cylindrical nnukwu spring - China Shandong Qingyun Machine
Helical spring; English aha: helical spring. A gburugburu spring mere nke spring waya. Mpịachi ọdịdị iche E nwere ọtụtụ ụdị nke gburugburu isi iyi, nke ike-ekewa: Nkịtị cylindrical eriri igwe iyi; Mbenata helical iyi. Dị ka ntụziaka nke gburugburu nwere ike kewara: Left n'aka spring Right n'aka spring. Cylindrical eriri igwe iyi ndị dị mfe na Ọdịdị, mfe Nlụpụta na kasị n'ọtụtụ ebe. Ya e ji mara eriri a ogologo akara, nke nwere ike ịbụ u ...
Helical spring; English aha: helical spring. A gburugburu spring mere nke spring waya.
Ịkpakọba ọdịdị iche
E nwere ọtụtụ ụdị nke gburugburu isi iyi, nke ike-ekewa:
Nkịtị cylindrical eriri igwe iyi;
Mbenata helical iyi.
Dị ka ntụziaka nke gburugburu nwere ike kere n'ime:
-Eme aka ekpe spring
Cylindrical eriri igwe iyi ndị dị mfe na Ọdịdị, mfe Nlụpụta na kasị n'ọtụtụ ebe. Ya e ji mara eriri a ogologo akara, nke ike-eji dị ka mkpakọ spring, erughị ala mmiri na torsion spring. Mgbe ibu bụ nnukwu na radial akụkụ dị ụkọ, abụọ mkpakọ iyi na dị iche iche diameters ike ga-eji ọnụ na-etolite a jikọtara spring.
Kọlụm gburugburu mkpakọ spring akụkụ, aha, nkọwa:
1. Spring waya n'obosara: d, mmiri waya n'obosara.
2. Spring Outer dayameta: D0, na-egosi na elu dayameta nke spring.
3. Spring n'ime n'obosara: D1, na-egosi n'ime dayameta nke mmiri, D1 = D-2D.
4. The dayameta nke spring: D2, nkezi dayameta nke mmiri, D2 = dd.
5. Ẹtop: t, na mgbakwunye na nke support yiri mgbaaka na ma nsọtụ, na-egosi na axial anya n'etiti abụọ n'akụkụ yiri mgbaaka.
6. The irè nọmba nke ibe n, ọnụ ọgụgụ nke support amama n2 na ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ibe N1, iji mee ka ndị mkpakọ spring ọrụ mụ, edo ike, na mmiri ga-esika na-eji ire ụtọ na ma na-agwụ mgbe n'ichepụta. The tightly esisịt akụkụ naanị eje ozi dị ka a na-akwado, ya mere, ọ bụ a support mgbanaka. E nwere atọ ụdị nke support yiri mgbaaka: 1.5, 2, na 2,5, na 2,5 bụ kasị eji. The ike nke okirikiri-nọ na-na hà pitches, a na-akpọ irè laps. The ọnụ ọgụgụ nke ibe N1 bụ nchikota nke ọnụ ọgụgụ ndị dị irè ibe n na ọnụ ọgụgụ nke support amama n2.
7. Free elu: H0, ngụkọta elu nke mmiri mgbe ọ na-adịghị emetụta mpụga agha, H0 = NT + (n2-0.5) d.
8. Ịmụbawanye ogologo: L, ogologo nke oghere iji ime ka mmiri, L≈n1√ (πD2) & sup2; + t & sup2 ;.
ịkpakọba e ji mara
Agbanwe n'obosara gburugburu spring ekewa: conical eriri igwe spring, gburugburu eriri igwe spring, concave eriri igwe spring.
Tapered eriri igwe iyi nwere ezi cushioning Njirimara na ike idi nnukwu ibu.
Helical eriri igwe iyi nwere ike ịchekwa ọzọ ume ma na idi elu ibu, ma n'ichepụta usoro bụ ihe mgbagwoju anya.
Concave eriri igwe iyi ndị yiri na arụmọrụ conical eriri igwe isi iyi na-eji cushions na matarasị.
The elu nke spring ígwè waya nwere gburugburu na akụkụ anọ shapes, na okirikiri cross ngalaba na-akacha eji.
A eriri igwe spring, a torsion spring, bụ a spring na-doro torsional deformation, na ya na-arụ ọrụ ibe a na-emerụ tightly n'ime a gburugburu udi. Ọgwụgwụ Ọdịdị nke ahụ torsion spring bụ a torsion na ogwe aka nke na-machined dị iche iche shapes kama a nko. Torsion iyi na-ejikarị na n'ibu itule usoro na na-n'ọtụtụ ebe na ulo oru mmepụta dị ka ụgbọala, igwe ngwaọrụ, na ọkụ eletrik.
Previous: Large spring - ekpo ọkụ eriri igwe spring arọ spring
Next: Soft njikọ nke ofufe ọnụ, adụ njikọ nke silica jel ákwà, kwaaji soft njikọ na ire ọkụ-retardant soft njikọ usoro
Aluminium Mgbawa ebu
Brass Mgbawa ebu
Bridge Dọrọ Chain
Ịwụ Igwe Mbuli Conveyors
Ịwụ Igwe Mbuli N'ihi Wood Mgbawa
USB Guide Chain
USB Protection sooks
CNC Machine Ngwá Ọrụ Towline
Dgt Catheter n'ọbọ
Ugboro abụọ Ahịrị Dọrọ Chain
Dọrọ Chain Guide oghere
Ofụri Esịt nchọ Towline
Galvanized Metal sooks
Nrụgide oru Towline
High Speed ​​Silent Dọrọ Chain
Hinged echebe ebu
Obere-2 akụkụ anọ Metal sooks
Plastic ntekwasa sooks
Echebe Cover Series
Kpụchasịrị Type Mgbawa ebu
Silent Dọrọ Chain
Igwe anaghị agba nchara Metal sooks
Tubing Dọrọ Chain
Two-Way Dọrọ Chain
Ventilashion Pipe Ájá mmiri Pipe
Wood Mgbawa ebu
Wood ibe Transport
Wood ibe Transport echebe ebu
Wood ibe Transport ebu